नयाँ वेद | मझेरी डट कम
kbs — Sat, 08/01/2009 - 11:15
मुना २०६६ साउन
हाम्रो आफ्नो वेद छैन हजुर बा ? उनीहरूको जस्तै हाम्रो पनि आफ्नै वेद छैन ?
"के भन्छ यो ?" हजुरबाले विद्यालयमा पाँच कक्षा पढिरहेको नाति रिठ्ठेतिर हेर्दै भन्यो- "के कुरा गर्‍या तैँले ?"
"आज विद्यालय चाँडै छुट्टी भो' ! विद्यालयमुनि बराजुको घरमा कथा लाग्या छ नि ! म पनि हेर्न सुन्न गा'थेँ । पर्खालमा बसेर सुनेँ । कथामा वेदका कुरा आ'थ्यो । बराजुहरूको वेद छ रे ! वेदमा ज्ञानगुणका कुरा छन् रे ! मान्छे कसरी बुद्धिमान हुन्छ सबै कुरा वेदमा छ रे ! त्यो वेद जनै लगाउने बराजुहरूले मात्रै पढ्न सुन्न हुन्छ रे ! मलाई पनि जनै लाइदिनुस् न । म पारिघरे पण्डित बराजुकोमा वेद पढ्न जान्छु, हुन्न हजुरबा ? मलाई पनि ज्ञानगुण पढेर बलियो हुन मन छ । बुद्धिमान हुन मन छ । मलाई पनि बराजु हुन मन छ । हुन्न हजुरबा ?" बेलुका आरनमा कामका औजार ठाउँ-ठाउँमा तह लगाएर राख्न लागेका गुन्जमान कामीसित रिठ्ठेले सोध्यो । नातिका कुरा सुनेर गुन्जे डरायो । कलिलैमा यो नाति बहुलाउन त लागेन ? कामी भएर जनै लाउने, वेद पढ्ने कुरा गर्छ ? बहुलायो भने के गर्ने ? लक्का जवान छोरो गोल पोल्न जाँदा जङ्गलमा अरिङ्गालले टोकेर मर्‍यो । यो एउटा फूलको बिरुवा ! लाहुरे जेठाले पढाउनुपर्छ भनेर हप्काए । पढ्न पठाएँ । अब के गर्ने ?
हजुरबा ट्वाल्ल परेको चाल पाएर रिठ्ठेले थप चासो राख्दै सोध्यो- "किन हजुरबा ? वेद पढेर मैले बुद्धिमान बन्न हुँदैन ? म बुद्धिमान बनेँ भनेँ ठाउँ ठाउँ जान्छु । बुद्धिको काम गर्छु । धन कमाउँछु । तपाईंले आरनमा काम गर्न पर्दैन नि ! यति बुढो हुँदा पनि तपाईंले घन चलाएको देख्दा मलाई तपाईंको माया लाग्छ ।"
नातिका कुरा सुनेर गुन्जका आँखामा आँसु भरियो । चिमिक्क चिम्लेर आँसुका ढिक्का बाउलाले पुछ्दै गुन्जले भन्यो- "उनीहरूको वेद हामीले पढ्न सुन्न हुँदैन बाबै ! सुन्यो भने बहुलाइन्छ भन्छन् ।"
"त्यो त मैले पनि सुनेँ । कथामा त्यो कुरा पनि भनेका थिए । त्यही सुनेर त मैले तपाईंसित सोध्या' नि ! भन्नुस् न हाम्रो आफ्नो चाहिँ वेदै
छैन ? छ भने अक्षर जानेकै छु । कसैले नपढाए म आफैँ पढ्छु । हाम्रो वेद पढेर त बहुलाइँदैन होला नि ! बराजुका जस्ता नबुझिने भाषामा पनि छैन होला हाम्रो वेद ।"
नातिका कुरा सुनेर गुन्ज थप डरायो । यो त अहिल्यै बर्बराउन थाल्यो के गर्ने ? जान्नेकोमा लानुपर्छ क्यारे । गुन्जले लिङ्गेधामी सम्झ्यो । लिङ्गेले धामी बसेर कार्मी कान्छालाई 'बोल् बोल्' भन्दै बकाएको सम्झ्यो । कुन चाहिँ बदमासले मेरो नातिलाई बहुलठ्ठी सल्काइदिएछ ।
"गुन्जे दाइ ! मेरो फाली बनिसक्यो त ?" अचानक आरनमा उभिन आइपुगेका खोल्चे लाउरेको आवाजले गुन्ज झसङ्ग भयो । हेर्दै भन्यो- "ओहो, ढुङ्गो खोज्दा देउता भेटियो । तपाईं त देश परदेश गएको जाने बुझेको मान्छे । मेरो यो नाति पाँचमा पढ्छ । यसले आज कहाँ के सुन्यो कुन्नि ? वेद पढ्छु भन्न थाल्या छ । यसलाई कहाँ लगेर ठीक पार्ने ? झाँक्री साहिँलाकोमा लाने कि ? उसले वन झाँक्रीसँग पनि सिकेको रे, हैन ?"
"कुरा के हो भन त बाबु ?" - लाहुरेले रिठ्ठेको काँधमा हात राखेर आत्मीयता जनाउँदै सोध्यो । रिठ्ठेले मेसैसित आफ्नो कुरा भनेपछि लाहुरे मुक्त कण्ठले हाँस्यो । गुन्जलाई अचम्म लाग्यो । यो लाहुरे त हामीजस्ताको भलो गर्ने मान्छे थियो । भबकाजीले साइतमा म देखिएँ भनेर ठाँटीको मूल बाटोमा मलाई कुट्न झम्टँदा यसैले छेक्या'थ्यो । काजीलाई कुरैकुराले र्‍याख्र्‍याख्ती पार्‍या'थ्यो ।
"गुन्जे दाइ, तपाईं किन डरा'को ? रिठ्ठे बिरामी भा'को त हैन नि ! यो त ज्ञानको भोक जागेको हो । हामीलाई बेलाबेला पेटको भोक जागे जस्तै यसको टाउकोमा ज्ञानको भोक जाग्यो । यसलाई आफ्नो वेद खोज्न र पढ्न मन लाग्यो । मैले लाहुरमा छँदा एकजना भयङ्कर पण्डित कामी भेटेको छु । उनको भाषण सुनेको छु । उनलाई वेद पुराण धर्मशास्त्र सबै कण्ठ थियो । उनको अगाडि कुनै बराजु आँऽ गर्न सक्दैनथ्यो । उनी भन्थे 'वेद सबैले पढ्न हुन्छ । त्यसमा राम्रा ज्ञानका कुरा छन् भने सबैले लिन हुन्छ । मानिसलाई अछुत भन्ने र वेद पढ्न नदिनेहरू अपराधीहरू हुन् । ज्ञान पनि कसैले पाउनहुने कसैले पाउन नहुने भन्ने कुरा हुन्छ र ? त्यस्तो हुँदै हुँदैन । हुनै हुँदैन । बरु हामीले बुझ्नुपर्ने नयाँ कुरा के छ भने त्यो पुरानो वेद पुराणले आज हाम्रो काम चल्दैन । हामीले सङ्घर्षमा उत्रेर आफ्नो लागि वेद आफैँले लेख्नुपर्छ । नयाँ वेद लेख्नुपर्छ । नयाँ वेद लेख्नका लागि पुराना वेदहरू पनि पढ्न चाहिँ पर्छ । हामी पढौँ । भेटे जति पढौँ । संसारमा ज्ञान गुनका जति किताप पाइन्छन् सबै पढौँ र आफ्नो वेद आफैँ लेखौँ ।' मैले अहिले रिठ्ठे बाबुका कुरा सुनेर ती पण्डितलाई सम्झेँ । तिनको भाषण सम्झेँँ । हेर्नुस् गुन्जे दाइ, यो बाबु भोलि गएर हाम्रो मुलुकका त्यस्तै ठूला मान्छे बन्ने छाँट पो देखेँ मैले त !" बोल्दाबोल्दै आवाजको गति मन्द पार्दै लाहुरेले भन्यो- "मसित धन हुँदो हो त म यी बाबुलाई पढ्न उतै पठाइदिन्थेँ ।"
यो आजभन्दा पैंतीस-चालीस वर्ष अगाडिको संवाद-घटना हो । राजधानीको नजिकै जिल्लाका गाउँको घटना हो । आज त्यस गाउँमा गुन्जकामी र खोल्चे लाहुरे दुवै छैनन् । हजुरबा बितेपछि आमा लिएर रिठ्ठे कलिलै उमेरमा सहर पस्यो । धेरै हण्डर खायो तर कहिल्यै हरेस खाएन । काम खोज्दै कति कारखानामा पुग्यो । कतिमा खटेर काम गर्‍यो । जतिसुकै खटेर काम गर्नुपर्दा पनि रिठ्ठेले पढ्न छाडेन । बालाजुमा डेरा गरी बस्ने रिठ्ठे पढ्नको लागि बेलुका नक्साल पुग्थ्यो । त्यसताका काठमाडौंमा रात्रि हाइस्कुलहरू धेरै थिएनन् ।
दुःखमा पिल्सेको शरीर । त्यसमा पनि दमको रोगी । काठमाडौंको चिसो कोठा तताउने साधनको अभाव । आमा गौंथलीले आफ्नो होनहार असल छोरा रिठ्ठेलाई धेरै वर्ष साथ दिन सकिनन् । माघमा एसएलसीको जाँच थियो । त्यसै वर्ष पुसमा गौंथली बितिन् । बित्नुअघि पीडा दबाउँदै सासको भाषामा गौंथलीले भनेकी थिइन्-"रिठ्ठे मेरो प्यारो छोरा तिमी जस्तै परे पनि पढाइ नछोड है ! तिमीले पढेर सिकेर यस मुलुकको ठूलो मान्छे बन्नुपर्छ । खराब चलन उखेलेर असल चलन रोप्ने हुर्काउने मान्छे बन्नुपर्छ । आफ्नो वेद आफैँ लेख्न सक्ने मान्छे बन्नुपर्छ ।"
आमाका इच्छा सुनेर रिठ्ठेका मुटुमा गाँठो परेको थियो । कष्टका बेला आमालाई अरू कष्ट नथपियोस् भनेर ऊ रुन सकेको थिएन । घुँक्क हुनलागेकालाई रोक्दै सम्हालिँदै रिठ्ठेले भनेको थियो- "आमा म पढ्छु । धेरै धेरै पढ्छु । म असल मान्छे बन्छु । अहिले तपाईंको रोग निको पार्न सकिनँ । राम्रा ठाउँमा पुर्‍याएर उपचार गर्न सकिनँ । मलाई यसको घिड्घिडो छ आमा । म यो बिर्सन्नँ । म भोलि तपाईं जस्ता लाखौँ आमाको दुःखकष्ट हटाउनसक्ने छोरा बन्छु । नेपाल आमाको दुःखकष्ट हटाउन सक्ने छोरा बन्छु बन्छु आमा, म रातदिन खटेर पढ्छु सिक्छु । म मेरी आमाको इच्छा पूरा गर्छु ।"
छोराको आश्वासन सुनेर सास जाने बेला पनि गौंथली मुस्कुराएकी थिइन् । आमाको त्यो सन्तोषको अनुहार रिठ्ठेको सम्झनामा अहिले पनि ताजा छ ।
यसैबीच समय फेरिएको छ । ठूला ठूला जनसङ्घर्षका क्रममा जनताको सोच समयमा पनि परिवर्तन आउन थालेको छ । रिठ्ठे अर्थात्् रिठ्ठे कामी अहिले नेपालका ठूला विद्वान् समाजसेवीमध्येको अगाडि गनिने नाम बनेको छ । जनसङ्घर्षका नायकहरू मध्ये गनिने नाम अगाडि बनेको छ । ऊ प्राध्यापन गर्छ । राजनीति पनि गर्छ । उसमा ज्ञान गुनको गहिराइ देखेर विद्यार्थीहरू हुरुक्क हुन्छन् । भाषण गर्दा लाखौँको जनसमूहलाई जुरुक्क पार्न सक्छ रिठ्ठे । सादा जीवन उच्च विचार । यस भनाइको नमुना जस्तो छ रिठ्ठे । गाउँमा पुगेको बेला रिठ्ठे अहिले पनि हजुरबा र लाहुरे काकाको कुरा गर्छ । तिमीहरूका नाममा रिठ्ठेले आफ्नो जग्गा-जमीन बेचेर जेहेनदार छात्रवृत्तिको लागि त्यहाँका स्कुलको खातामा पैसा राखिदिएको छ । रिठ्ठेले यति ठूलो मान्छे हुँदा पनि आफ्नो नाम उपनाम केही फेरेको छैन । यसै नाममा गर्व गर्छ ऊ । रिठ्ठे कुनै एउटा जात जातिलाई मात्र होइन सारा नेपाल र नेपालीलाई माया गर्छ । रिठ्ठे अहिले नेपाली जनतासित मिलेर जनताको वेद लेख्ने अभियानमा लागेको छ । ऊ अहिले जनताका संविधान जनताबाट लेख्ने लेखाउने महान् अभियानमा लागेको छ । अहिले पनि ऊ जोड दिएर भन्छ- त्यसै कहाँ लेखिन्छ र जनताको वेद ? जनताको ठूलो सङ्घर्ष र आन्दोलनले मात्र लेखिन्छ । क्रान्तिले लेखिन्छ । यो काम गर्न धेरै वर्ष लाग्न सक्ला तर एकदिन त्यो लेखिन्छ । हाम्रो अतीत उज्यालो थिएन र वर्तमान पनि झलमल्ल छैन । भविष्य भने उज्ज्वल छ- जनताको भविष्य उज्ज्वल छ । हामी त्यही उज्ज्वल भविष्यका लागि नयाँ वेद लेख्दैछौं ।
kati ramro ra man chhune
अतिथि — Tue, 11/03/2009 - 19:57
kati ramro ra man chhune rahechha.Sachi copy garer credit ka satha patrika ma chhapna milchha ki nai!!
Anyway lekhakjyulai dherai dharai Dhanyebaad!!!
Rachana ramro laagyo
Manoj kafle — Wed, 11/04/2009 - 15:46
यो देश मा म बच्न चाहन्छु . तर
अतिथि — Tue, 02/16/2010 - 22:41
यो देश मा म बच्न चाहन्छु . तर मलाई यो देश ले बच्न दिएन
तर मैले बिर्सेछु कि यो देश मा जनबर बएक बच्ने अदिकार छैन .
दुखाउँदा मन चसक्क भो
बेली र चमेली तीजलाई माइत हिंडेछन
समालोचकको दृष्टिमा विधागत रमेश विकल
देश बन्ने (मुक्तक)
सन्तानको चक्कर, छिमेकीको ठक्कर
गजल मुख्य विधा हो कि सहायक विधा ? [ गजल संवन्धी बहसमा भाग लिऔ ।] श्रृंखला - ३
हिजो पनि जिन्दगीले, बाँच्नै मानेन
वीर सपूत (कविता)
बिर्सिएर तिमीलाई अन्तै भुल्न सकिन
सँगैका त्यो मायालु साथहरू